ထုတ်ကုန်များကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးကို အသက်ကဲ့သို့မှတ်ယူသည်၊ အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 16 ခုကို သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ကို နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် အဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်ကာ မြင့်မားစွာပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက်၊ - အရည်အသွေးရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ သို့မှသာ သင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်း ပိုရှည်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။7* သင့်အတွက် 24 နာရီအွန်လိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုရှေ့ဆက်ရန်ကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် cons များကိုပေးဆောင်သည်...
တိကျမှုမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်အစိတ်အပိုင်းများ၏ စက်ရူပါရုံကို တိုင်းတာခြင်းသည် ထိတွေ့မှုမဟုတ်သော တိုင်းတာခြင်းတွင် ပါဝင်ပြီး တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္တု၏ ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားရုံသာမက အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ ဖိအားမြင့်ခြင်းကဲ့သို့သော တိုင်းတာထားသော အရာဝတ္ထု၏ ထိတွေ့မှုမရှိသော အခြေအနေနှင့်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အရည်၊ အန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် စသည်ဖြင့်။ မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော စက်ယန္တရားများသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအသစ်များ၏ တိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အရေးကြီးသော မစ်ရှင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆွဲဆောင်မှုတို့ လိုအပ်ကြောင်း ...
ကြိတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် ကြိတ်ခွဲသည့်စက်ဖြင့် စက်ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်သည့် စက်ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြိတ်ဖြတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် လည်ပတ်နေပြီး၊ အလုပ်ခွင်နှင့် ကြိတ်ဖြတ်စက်၏ ရွေ့လျားမှုသည် အစာထဲတွင် ရှိနေသည်။ ၎င်းသည် လေယာဉ်၊ groove၊ ကွေးကောက်သောမျက်နှာပြင်၊ ဂီယာစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကြိတ်စက်သည် ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ခွဲသည့် စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကြိတ်ခွဲသည့်လေယာဉ်၊ groove၊ ဂီယာသွားများ၊ ချည်မျှင်နှင့် spline shaft၊ ကြိတ်စက်အပြင်...
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ- တံမြက်မရှိ၊ အသုတ်ရှေ့၊ ISO ကျော်လွန်၍ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှု၊ တိကျမှု မြင့်မားသော ထုတ်ကုန်အမည်- တိကျသောစက်ဖြင့် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်- CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း- 304၊ 316 သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ အလူမီနီယမ်၊ စသည်တို့။ ဝိသေသလက္ခဏာများ- ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်၊ အပူခံနိုင်ရည်၊ နိမ့်သောအပူချိန်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ အာကာသယာဉ်ကိရိယာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဥ်အင်ဒု...
ကြိတ်စက်ဆိုသည်မှာ အလုပ်ခွင်ရှိ အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာပြင်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိတ်ဖြတ်စက်ကို အဓိကအသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြိတ်ဖြတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် လှည့်နေပြီး အလုပ်အပိုင်း (နှင့်) ကြိတ်ဖြတ်စက်၏ ရွေ့လျားမှုသည် feed motion ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လေယာဉ်၊ groove၊ မျက်နှာပြင်၊ ဂီယာစသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကြိတ်စက်သည် ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် ကြိတ်စက်ကို အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိတ်ခွဲသည့်လေယာဉ်၊ groove၊ tooth၊ thread နှင့် spline shaft အပြင်၊ ကြိတ်စက်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ပရိုဖိုင်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်...
အစိတ်အပိုင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ တိကျမှုနှင့် အမှားအယွင်းများသည် စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်၏ ဂျီဩမေတြီဘောင်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ တိကျမှုအတိုင်းအတာသည် သည်းခံမှုအဆင့်ကိုလက်ခံသည်၊ အဆင့်ငယ်လေ၊ တိကျမှုမြင့်မားလေ၊ တန်ဖိုးကြီးလေ၊ အမှားအယွင်းများလေလေဖြစ်သည်။ Machining, processing error သည် သေးငယ်သည်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ processing method မှရရှိသော တကယ့် parameters များသည် တိကျသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ Hardware မှိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ machining error ရှိနေသရွေ့ အစိတ်အပိုင်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုမှ...
1. Chamfering ၏ Function chamfering ၏ ယေဘူယျလုပ်ဆောင်ချက်မှာ burr များကို ဖယ်ရှားပြီး လှပစေပါသည်။ သို့သော် ပုံတွင်ဖော်ပြထားသော အထူးပြုလုပ်ထားသော chamfering အတွက်၊ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် bearing ၏ installation guide ကဲ့သို့သော တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး အချို့သော arc chamfering (သို့မဟုတ် arc transition) သည်လည်း stress concentration ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး shaft အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို အားကောင်းစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်, ပရိဘောဂအပြောင်းအလဲနဲ့မပြီးဆုံးမီ, ယေဘုယျအားဖြင့်လွယ်ကူသည်။ လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရား အစိတ်အပိုင်းများတွင်...
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ကုန်အမည်- မော်တော်ကားကို သယ်ဆောင်သည့် ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းစဉ်- CNC စက်ကိရိယာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း- ကြေးဝါပစ္စည်း ဂုဏ်သတ္တိများ- ၎င်းသည် မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် သံချေးတက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်နှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည့်အပြင် ဂီယာ၊ ပိုးမွှားဂီယာကဲ့သို့သော ချေးခုခံမှု လိုအပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ , bushing, shaft, etc. Proofing cycle: 3-5 days နေ့စဥ်စွမ်းရည်: သုံးထောင် လုပ်ငန်းစဉ်တိကျမှု: ဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းလိုအပ်ချက်အရ လုပ်ဆောင်ခြင်း အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Lead the hor...
အစိတ်အပိုင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အလွန်တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အနည်းငယ်သတိမထားမိခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေသည့် သည်းခံနိုင်မှုအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်သွားစေရန်၊ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော သို့မဟုတ် အလွတ်အပိုင်းအစကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အစိတ်အပိုင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ၊ ကြမ်းတမ်းပြီး ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို မတူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော စက်ကိရိယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ကတည်းက...
ကြိတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် workpieces ၏မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကြိတ်ဖြတ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုသည့်စက်ကိရိယာကိုရည်ညွှန်းသည်။ အများအားဖြင့်၊ ကြိတ်ဖြတ်စက်ကို အဓိကအားဖြင့် လှည့်ပတ်ထားပြီး workpiece နှင့် milling cutter ၏ရွေ့လျားမှုသည် feed movement ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လေယာဉ်များနှင့် grooves များအပြင် အမျိုးမျိုးသော မျက်နှာပြင်များနှင့် ဂီယာများကို ကွေးနိုင်သည်။ ကြိတ်စက်သည် ကြိတ်ခွဲစက်များဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။